Masinina mameno, Cubitainer, fitoeran-drano azo zahana - Kaiguan
izahay hanome antoka anao
mahazo foana tsara indrindra
Makà santionany sy boky misy sary maimaimpoanaGO
Horonantsary fitsapana fanerena
AZAFADY IZAY MAIN PRODUCTS
Malefaka sy malefaka, azo averina ary maivana, fihenan'ny vidiny
Afaka i semi-Collapsible Jerry
manoro hevitra izahay hisafidy
Fomba fanarahana miovaova
Ny atrikasa misy antsika dia misy milina famolavolana seta 4 (Model 25A); 2 dia mametraka milina famolahana tsindrona mitsivalana an'ny 120g, milina fametahana tsindrona mitsivalana 4 an'ny 125g, milina fananganana tsindrona mitsivalana miisa 80g, milina fanaovana kitapo 2.
Afaka manome kitapo cheetaher 1 litatra ka hatramin'ny 50 litatra ao anaty boaty isika; Ary afaka manome cubitainers isika manomboka amin'ny volum 1 litatra ka hatramin'ny 25 litatra.
Manana tahiry ho an'ny kitapo mahazatra rehetra izahay. Ny lalam-pamokarana dia miasa 24 ora.
izahay hanome antoka fa hahazo foana ianao
vokatra tsara indrindra.
Ny orinasa dia mandrakotra faritra 8000㎡
Manana mpiasa 60
12 taona niainana ny famokarana
ASAN'NY FIVORIANA TSY MAFY
Efitra madio 4000㎡
Tsena sy fampiharana
Fanadiovana tànana . Tsiranoka mamono otrikaretina
Gel ultrasound ara-pahasalamana
Voasarim-boanjo (Sake, saosy, vinaingitra)
inona hoy ny mpanjifanay?
Sipra lau Hong kong SAR
Kalitao tena tsara. Niasa ny rehetra araka ny voalaza. Ny kitapo mitsangana dia nanampy be tokoa tamin'ny fampihenana ny vidin'ny lozisialy satria mafy sy mafy toy ny aseho
Tena nanampy tokoa i John ary nanompo anay tamin'ny alàlan'ny fifandraisana tsy misy kilema. Hividy aminy indray izahay, misaotra anao amin'ny fanohananao!
Fanontaniana momba ny lisitry ny vidiny
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia namolavola vokatra kilasy voalohany manaraka ny fitsipiky ny kalitao aloha. Ny vokatray dia nahazo laza tsara eo amin'ny sehatry ny indostria sy ny valisoa eo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha ..
avy amin'ny adminSep-06-2020
Kitapo fonosana ho an'ny hypochlo ...
Voataonan'ny COVID-19, misy ny fitomboan'ny fangatahana vokatra azo avy amin'ny bakteria toy ny otrikaina sy alikaola. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020 dia miasa mandritra ny 24 ora isan'andro ny masininay ho an'ny tsenan'ny otrikaretina asidra hypochlorous sy ny alikaola. Mandefa mihoatra ny 100000 pcs b ...
Fa maninona no mpisoloky?
Ity no vokarinay vaovao misy famolavolana kinova vaovao. Ny kitapo dia vita amin'ny plastika multilayer. Ny sosona ivelany (polyamide + polyethylene) dia miaro amin'ny oxygen sy ny hamandoana; ny hakitroka sy ny firafiny dia mety tsy mitovy arakaraka ny filan'ny mpanjifa na ny vokatra. Ny sosona anatiny (polyethylene) ...
Mihabetsaka ny mpanjifanay manomboka mampiasa che cheseeur hamenoana vokatra ranoka. Avy eo, inona ny che cheseur? Izy io dia fitoeran-javatra fonosana vaovao izay manambatra ny fahafaha-mihetsika ao anaty kitapo ary ny tombony azo avy amin'ny vokatra fonosana henjana na semi-henjana, izay mahatonga ny cheeratainer ho ...